कोरोना संक्रमणविरुद्धको खोपको समस्या नहुने मन्त्रीको दाबी - चौतारी पोष्ट अनलाइन
कोरोना संक्रमणविरुद्धको खोपको समस्या नहुने मन्त्रीको दाबी
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले कोरोना संक्रमणविरुद्धको खोप लगाउन लाइन अब बस्नु नपर्ने ठोकुवा गर्नुभएको छ। उहाँले सबै नेपालीलाई सजिलै खोप लगाउन सरकारले योजना तयारी गरिरहेको जिकिर गर्दै सरकारले खरिद गरेको खोप धमाधम आइरहेको अवस्थामा खोपको समस्या नहुने दाबी गर्नुभयो ।
नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुसँगै मन्त्री खतिवडा फाइजर खोपको अभियानको अवलोकन गर्न त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुग्नुभएको थियो । सोही क्रममा उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । सर्वसाधारणले आफूलाई पायक पर्ने खोप केन्द्रमा गई जुनसुकै बेला खोप लगाउन सक्ने गरी योजना बनाइरहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो- ‘सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको खोप अभियानलाई सफल बनाउन सजिलै खोप पाउने व्यवस्था गर्र्न लागेका हौं । हाल वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, सैनिक अस्पताल र नेपाल प्रहरी अस्पतालमा अस्पतालमा २४ सै घण्टा सर्वसाधारणलाई खोपको व्यवस्था गरिएको छ ।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले पनि खोपको समस्या नभएको बताउनुभयो । २ करोड ५० लाख मात्रा खोप नेपाल आइपुगेको र त्यति नै मात्रामा आउने क्रम रहेको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘अब सबै नेपालीलाई पुग्ने गरी खोप आउने क्रम निरन्तर जारी रहन्छ ।’प्रवक्ता डा. पौडेलले यसअघि दशैं र तिहारमा राजधानी छाड्ने सबै यात्रुलाई खोपको व्यवस्था गरेको र अब सबैलाई तोकिएको अस्पताल र खोप केन्द्रबाट सजिलै खोप दिने गरी तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहका वडा, तोकिएको अस्पताल, स्वाथ्य केन्द्रलगायतका क्षेत्रबाट खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । ललितपुर महानगरपालिकाले हिजो र आज अभियान चलाएको छ ।मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म कुल जनसंख्याको झन्डै ३० प्रतिशतले खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका छन् । १८ वर्षमाथि खोप लगाउने लक्षित जनसंख्या करिब २ करोड रहेकोमा अहिलेसम्म करिब ४४ प्रतिशतले पहिलो मात्रा खोप र ३७ प्रतिशतले पूर्ण मात्रा खोप लगाएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
मन्त्रिपरिषद्को अघिल्लो बैठकले १२ वर्षका बालबालिकादेखि १८ वर्षसम्मका किशोरकिशोरीलाई लगाउन मिल्ने फाइजर खोपको ६० लाख मात्रा खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । उक्त निर्णयसँगै केही महिनापछि अधिकांश स्कुले बालबालिकाले फाइजर खोप लगाउन पाउनेछन् । मन्त्रालयले त्यसको आन्तरिक तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीले खोप लगाए पनि १२ देखि १५ उमेर समूहका विद्यार्थीले खोप लगाउन पाएका छैनन् । देशैभरका विद्यालय पूर्णरूपमा खुलेसँगै विद्यार्थीलाई खोप व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य शुरु गरेको जनाएको छ ।newsofnepal/from
Prevथ्री स्टारसँग रुस्लान र एडिडासको सम्झौता नविकरण
Nextप्रदेश २ : मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिन चौतर्फी दबाब